Xubno ka tirsan shabakadda cilmi -baarista beeraleyda ayaa adeegsada sawirrada taleefanka gacanta si ay ula socdaan una soo sheegaan cayayaanka baradhada iyo cudurrada Cotopaxi, Ecuador. Sumcada sawirka: Israel Navarrete
Qeybtan ayaa markii hore ka soo muuqatay Tank Cuntada waxaana dib loogu daabacay halkan oggolaansho buuxda.
Markii uu ku koray La Paz, Bolivia, Magali Garcia Cardenas wuxuu xusuustaa in loo sheegay in beeraleyda gobolka Altiplano ee Andes ay arkeen xayawaanka maxalliga ah iyo ubaxyada si ay u saadaaliyaan in xilliga beeritaanka uu ka sii qoyan doono sidii caadiga ahayd. Goor dambe, markii ay samaynaysay Ph.D. cilmi -baarista goobta si ay u noqoto cilmi -baare, waxay baratay in aqoon -wadaagani uusan ahayn halyeey reer magaal ah. Taas beddelkeeda, waxay caddayn u ahayd fahamka hoose ee beeralayda ee qaababka cimilada ee qayb ka mid ah dabayluhu ka qaadeen adduunka oo ku yaal 13,000 fuudh oo ka sarraysa heerka badda ee dhaldhalaalka daran ee qorraxda dhulbaraha.
Fahamkaas qaabaysan ayaa hadda hagaya shaqada Garcia ee Duqa Magaalada Universidad de San Andres ee La Paz, halkaas oo ay iskaashi la samayso beeraleyda yar yar iyo shuraakada kale si loo garto isbeddelka cimilada iyo cimilada iyadoo la adeegsanayo hababka saadaasha dhaqanka - kiiskan oo la eegayo daboolka daruuriga - iyo sidoo kale falanqaynta xogta laga bilaabo 16 xarumood oo cimilo oo ku yaal Altiplano. Waa dhaqan firfircoon oo hal -abuur leh oo maamuusa aqoonta cilmiga nafsiga ah iyo aqoonta asaliga ah labadaba.
"Xilligan oo isbeddelka cimiladu uu burburinayo nidaamka beeraha iyo cuntada ee adduunka, waa inaan maqalnaa fikradaha iyo dhaqanka dadka beeraya abuurka iyo beerista ciidda xaaladahan sii kordheysa ee adag."
“Cilmi -baadhayaashu kuma noolaan karaan duruufaha duurka ee beeralaydu la kulmaan maalin kasta,” ayuu yidhi Garcia. "Beeraleydu aad bay isugu dhafan yihiin dabeecadda halka ay wax ka soo saaraan oo waxay leeyihiin fikrado aad u wanaagsan oo ku saabsan waxa dhacaya." Isla mar ahaantaana, waxay si joogto ah u curiyaan iyagoo soo bandhigaya aalado cusub, xeelado, noocyo dalagyo, iyo teknolojiyad — oo ay ku jiraan kooxaha WhatsApp si ay ula wadaagaan natiijadooda midba midka kale.
Waxa ka dhacaya guud ahaan Altiplano waa hal tusaale oo ah dhaqanka sii kordhaya ee caalamka shabakadaha cilmi -baarista beeralayda (FRN), kuwaas oo ku dadaala inay hagaajiyaan beeraha iyo nidaamyada cuntada iyagoo kobcinaya xalalka deegaanka kuwaas oo ku habboon meelaha gaarka ah ee laga shaqaalayn doono. Waqtiga isbeddelka cimiladu uu burbur ku hayo hababka beeraha iyo cuntada adduunka, waa in aan dhegeysannaa garaadka iyo hab -dhaqanka dadka beerta abuurka iyo beeridda carrada xaaladan adag ee sii kordheysa. FRNs waxay qayb ka yihiin nidaam loo siman yahay oo siiya beeraleyda iyo beeraleyda cod.
Xulashada kala duwanaanshaha ka -qaybgalka ee gobolka Huancavelica ee Peru. Sumcada sawirka: Grupo Yanapai
Noocyo baradho ah oo ka soo jeeda gobolka Choppcca ee Peru. Sumcada sawirka: Grupo Yanapai
Laga bilaabo 2012, Machadka McKnight's Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada (CCRP), oo la aasaasay sannadihii 1980 -maadkii si ay uga jawaabto arrimaha gaajada adduunka oo ay ku jirto dhibaatada macaluusha ee Itoobiya, waxay qiyaastay in habka FRN uu awood u siin doono beeraleyda yar yar, saynisyahannada, iyo ururada aan dawliga ahayn inay hirgeliyaan cilmi -baaris oo labaduba ka qaybqaadasho iyo waxtar badan horumarinta aqoonta agroecological iyo ku dhaqanka.
Maanta, waxaan ognahay in FRN -yadu shaqeeyaan. Iyada oo la kaashaneysa aqoonyahannada iyo xirfadleyda kale, beeraleyda adduunka oo dhan ayaa wada sameeya ajendayaal cilmi baaris waxayna ku hawlan yihiin inta hawsha socoto. CCRP ayaa qayb ka ah dadaalkan, iyada oo mashaariic ka socota 10 dal.
Galbeedka Kenya, beeraleydu waxay la kaashanayaan cilmi baarayaasha si loo hagaajiyo caanaha loo yaqaan bokashi, oo ah compost ka samaysan qashinka cuntada. Burkina Faso, FRNs waxay kor u qaadayaan waxsoosaarka bambara, oo ah miraha dhulka oo ah il muhiim u ah borotiinka. Dumarka beeraleyda ah ee ku nool tuulooyinka Galbeedka Afrika ayaa ku guuleystay inay tijaabiyaan oo ay doorteen abuurka geedka luulka ah si ay uga gudbaan taranka si loogu beero dhulka bacriminta ciidda ee hooseeya. Beeraleyda Ecuador ayaa ka shaqeynaya maareynta cayayaanka dalagga iyagoo aan ku tiirsanayn sunta cayayaanka ee kiimikada ah. Kor u qaadidda awoodda beeraleyda ee helitaanka iyo la -qabsiga hal -abuurnimada beeraha ayaa hagaajin karta wax -soo -saarkooda, sugnaanta cuntada, iyo adkeysiga.
“Ujeeddadeennu ma aha oo kaliya inaan korono cunto si aan u quudinno kuwa gaajaysan maanta, laakiin sidoo kale inaan u sameyno si waara,” ayay tiri Batamaka Somé, oo ah wakiilka gobolka CCRP ee Galbeedka Afrika, oo ku koray qoys beeraley ah oo ku nool Burkina Faso. Kaliya maahan dadka ku nool beelahooda, laakiin kuwa aan wali dhalan. ”
"Waqtigii hadda waa qaab cusub marka ay timaado habka cilmi-baarista loo sameeyo si loo quudiyo adduunka."
Maanta, Qaramada Midoobey ayaa qabatay kulankeedii ugu horreeyay abid Shirka Nidaamka Cuntada, halkaas oo qof walba laga bilaabo beeraleyda ilaa siyaasad dejiyayaasha ay qaadi doonaan tallaabo ay wax uga beddelaan sida aan u beero cunto wanaagsan oo la awoodi karo, la heli karo, oo taageerta deegaanka. Waqtigu wuxuu hadda u yahay tusaale cusub marka laga hadlayo habka cilmi -baarista loo sameeyo si loo quudiyo adduunka. Isbeddelkan wuxuu u adeegsan doonaa cilmi-baaris dadweyne wanaag dadweyne si loo xoojiyo hab-ku-saleysan nidaamyo oo kor u qaadaya ilaha aqoonta kala duwan isla markaana aqoonsanaya in nidaamyadeenna cuntada, caafimaadkeenna, iyo meeraheennu ay isku xiran yihiin. FRNs waxay fure u yihiin dhisidda nidaamkan oo aad u habboon oo loo dhan yahay.